NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ပေးပါဆရာမ > လုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်ခွင့်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ကြိယာပုံစံ (သင်ခန်းစာ 35)
လုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်ခွင့်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ကြိယာပုံစံ (သင်ခန်းစာ 35)
လုပ်နိုင်တာလုပ်ခွင့်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ကြိယာပုံစံမှာ အဓိပ္ပာယ် ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက တစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပါတယ်။
ဥပမာ ကျမ ဂျပန်စကားပြောနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ရင် HANASHIMASU(ပြောတယ်။ပြောမယ်) နဲ့ HANASEMASU ပြောနိုင်တယ်).လို့ပြောင်းရပါတယ်။ .
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်မှာ ဆိုရင် လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်။ ဥပမာ ခရက်ဒစ်ကဒ် သုံးလို့ရတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါမှာ TSUKAIMASU (သုံးတယ် သုံးမယ်)ကိုTSUKAEMASU(သုံးလို့ရတယ်)လို့ပြောင်းရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကြိယာတွေအားလုံးကတော့ ဒီအတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ မိုးရွာတယ်၊ မိုးရွာမယ်ဆိုတဲ့ FURIMASU လိုမျိုးလူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့မဆိုင်တဲ့ ကြိယာတွေမှာတော့ ဒီကြိယာပုံစံကိုသုံးလို့မရပါဘူး။
လုပ်နိုင်တာ လုပ်ခွင့်ရှိတာကို ဖော်ပြတဲ့ ကြိယာပုံစံတွေ
ကို ဘယ်လိုပြောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပါမယ်။ ပထမနည်းက MASU ရှေ့မှာ E ဆိုတဲ့ သရသံပါတဲ့ ကြိယာတွေဆိုရင်MASUရဲ့ရှေ့မှာ RARE.ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် TABEMASU (စားတယ်၊ စားမယ်)က TABERAREMASU (စားနိုင်တယ်).လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြောင်းနည်း ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမပုံစံက သရသံ I ကို သရသံEလို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒီတော့ HANASHIMASU(ပြောတယ်၊ပြောမယ်) က HANASEMASU (ပြောနိုင်တယ်၊ ပြောနိုင်မယ်) လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။
TSUKAIMASU (သုံးတယ်၊ သုံးမယ်)ကTSUKAEMASU (သုံးနိုင်တယ်။ သုံးနိုင်မယ်) လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။.
နောက်တစ်မျိုးက RARE ရဲ့ရှေ့မှာ MASU ကို ထည့်လိုက် တာပါ။ ဒီတော့ MIMASU (ကြည့်တယ်၊ ကြည့်မယ်) က MIRAREMASU(ကြည့်နိုင်တယ်၊ ကြည့်နိုင်မယ်). လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။
တချို့ ကြိယာတွေရဲ့ သဏ္ဌန်ပြောင်းနည်းက ပုံမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ KIMASU (လာတယ် လာမယ်)က KORAREMASU(လာနိုင်တယ် လာနိုင်မယ်)လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ SHIMASU လုပ်တယ် လုပ်မယ်က​တော့ DEKIMASU(လုပ်နိုင်တယ် လုပ်နို်မယ်)လို့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါတွေကို သေချာ မှတ်ထားပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းစာမျက်နှာကိုသွား လေ့လာပါ။